Zuva: Kukadzi 11, 2020
Mhepo-yakavharwa yakamira yakaiswa mukushandisa neErzincan Municipality yakaitwa kuti iwanikwe kune vagari munzvimbo dzakasiyana siyana dzeguta. Iyo ichangobva kuvakwa yakagadzika bus stop paHalit Pasha Street yakaiswa mumasevhisi. Mhepo-inonamira inomira kubva kuvagari [More ...]
Gadziriro dzave kupedzwa kunyorwa kweParkomat application, iyo yakaziviswa neMetropolitan Municipality Council yeMersin Metropolitan Municipality Vahap Seçer, iyo yakaziviswa nevagari kuitira kuti vabvise matambudziko mukutsvaga nzvimbo yekupaka. Kukadzi [More ...]
Salcano Sakarya Chikwata Chekukwasva Inopinda Mugore Idzva SeChidutu
Metropolitan Municipality Cycling Team yakapinda mumwaka mutsva kunge dutu. Mumakwikwi matatu ekutanga emwaka mutsva, Metropolitan Bicycle Team, iyo yakakunda 3 goridhe, sirivheri 3 uye 1 menduru dzebronze uye haina kubva pabhenji, yaive zvekare Yenyika. [More ...]
Turkey Kamu-Sen President Önder Kahveci, akati TÜVASAŞ vasisiri aigona kubudisa njanji mota kuti yabva kunze uye kuti goko yakatanga. Turkey Kamu-Sen President Önder Kahveci, kuti Turkish Transportation-You [More ...]
Channel Istanbul EIA Positive Report Yakatamiswa
Dzvanya paFebruary 11, 2020 nemutungamiriri weTSMOB Emin Koramaz maererano nehurongwa hwepamutemo hwakatangwa nebazi rezvemamiriro ekunze uye Urbanization pane EIA Positive Sarudzo pamusoro peKanal Istanbul Project [More ...]
Bursa Teleferik AŞ yakazivisa kuti ndege dzichatanga zvakare na14.30 sezvo mhepo ichidzokera kune yakajairwa. Iyo tambo yemagetsi, iyo inopa kumwe kufambisa pakati peBursa guta repakati uye Uludag, haigone kuvakwa kubva mangwanani, nekuda kwekuderera kwemhedzisiro yemhepo. [More ...]
Nei Haydarpaşa Chiteshi chichigara sechitima chechitima?
Nei Haydarpaşa Chiteshi chichifanira kuramba chiri sechiteshi, kwete hotera, mamuseum, nzvimbo yekutengesa kana chero chinhu chipi zvacho? Isu tinoomerera pachikumbiro ichi. Kusimbirira kwedu kunobva pachinhu chekuti Haydarpaşa Chitima chechitima haisi nzvimbo. Uyezve, kushandiswa kwaGar [More ...]
Melikgazi Municipality to Kupfuura Karahöyük Level Kuyambuka
Melikgazi Mayor uyo akataura kuti inopfuura ichaitwa kune njanji kuyambuka yekufambisa yakachengeteka uye serial. Mustafa Palancıoğlu; Kuti migwagwa yemuguta iwedzere, inoshanda uye ichengeteke, mazhinji emaguta [More ...]
TURKSTAT: Vakadzi Vagamuchira Chetatu YeDzimba Dzakatengeswa
In Turkey mugore 2019 1 348 729 dzimba rokutengesa kunoguma yachinja maoko. Kunyange 57,5% yedzimba dzakatengeswa dzinotorwa zvakabatana nevarume, 31,2% nevakadzi, 1,8% nevarume nevakadzi, 9,5% vari kunze kweiyi. [More ...]
Nano Technological Kushambadzira muTram uye Bhazi muKocaeli
Mushure mehutachiona hwekorona hwakabuda muChina uye hwakakonzera kuvhunduka kukuru pasi rese, kuchenesa mota dzekufambisa kwakave nekuonekera. Transportation Park, uko avhareji yevanhu zviuru zana vanofamba zuva nezuva muKocaeli, [More ...]
Kubva munyika makumi masere neshanu kuti zvikamu zvacho zvishandiswe mukugadzirwa kwe "GÜNSEL", iri mota yemunyika neyenyika yenyika yedu uye gadzira prototype yakagadzirwa neinjiniya yeTurkey uye yekutanga B20 ichaunzwa munaFebruary 9. [More ...]